Cilmi baarayaal ka tirsan Jaamacadda Gobolka Washington ayaa soo saaray hab loogu beddelo qashinka caagga ah maalin kasta shidaalka diyaaradda, sida ay jaamacaddu ku dhawaaqday Talaadadii. Daraasadan ayaa lagu daabacay internetka joornaalka Ingiriiska ee Applied Energy.
Cilmi -baadhayaashu waxay dhulka soo dhigeen agabyada polyetylen sida dhalooyinka biyaha macdanta ah, dhalooyinka ilmaha iyo bacaha caagga ah u jajabisay cabbirkii miraha bariiska oo ay dul dhigtay kaarboon firfircoon, oo ah kicin. “Waxaa lagu dubay” dareeraha tuubada oo heerkulkiisu yahay 430 ° C ilaa 571 ° C, jajabyada ayaa aakhirka loo beddelaa 85% shidaalka diyaaradda iyo 15% naaftada.
Cilmi -baadhayaashu waxay sheegeen in caaggu uu leeyahay atamyo hydrogen badan, kuwaas oo ah qayb muhiim u ah shidaalka. Laakiincaag ah way adag tahay in la liido, oo kaliya ku darida wax kiciya ayaa jabin karta xidhitaannada kiimikada waxayna u rogi kartaa shidaal. Waxay awoodeen inay 500kg oo caag ah u beddelaan 350kg oo shidaal ah oo ay soo saaraan gaasyo guban kara sida hydrogen, methane, ethane iyo propane. Ku dhowaad dhammaan tamarta la heli karo ee balaastikada ayaa la ururin karaa iyadoo la adeegsanayo habkan, tayada tamartuna waa wanaagsan tahay, geeddi -socodkuna wuxuu ku habboon yahay wax -soo -saarka ballaaran.